Ukwephula Imithetho - Indiya
Umlingisi RADHIKA APTE ukhuluma ngohambo lwakhe neminyaka yakhe embonini no YUKTI SODHA
Isithombe: Sheldon Santos
Amafilimu angamashumi amane nanye, amafilimu amafushane ayisithupha, uchungechunge lwama-TV amathathu, imidlalo engu-13 ngezilimi eziyisikhombisa, ukunconywa okuningi kamuva, uRadhika Apte usaqhubeka nokuqina. Osebenza ngokweqile ozivumile usebenzise isikhathi sakhe eLondon, ematasa nokwakha ikhaya elisha, ukubukela amafilimu, ukufunda, ukukhuthazeka nokubhala okuningi. Ukuvalelwa phansi, uyasitshela, bekuyithuba elihle lokubuyela kumijikelezo yokulala ejwayelekile, ukuthatha ikhefu emsebenzini, nokuba naye.
Izingcaphuno ezivela kwinhlolokhono ...
Ku-2020, ubonwe kwifilimu yamazwe omhlaba ethi A Call To Spy nakuRaat Akeli Hai obongwa kakhulu kuNetflix. Ake usitshele ngalezi.
Ukushayela Inhloli kwakuyindaba ekhuthazayo kakhulu. Ukuthatha ifilimu kungenze ngafunda okuningi ngeNoror Inayat Khan wodumo. Ngijabule kakhulu ukuthi ukumdlala kungenze ngafunda okuningi ngaye. Ukusebenza ngamasethi ahlukahlukene nakho kunginike umngani omuhle kakhulu kuLydia Dean Pilcher (umkhiqizi waseMelika), ubudlelwano engizohlala ngibazisa. Futhi ngahamba izindawo ezinjengePhiladelphia neBudapest. Ngoba bekuyifilimu encane kangako, wonke umuntu ufake inhliziyo yakhe nomphefumulo wakhe kulo msebenzi.
URaat Akeli Hai unginike ithuba lokudlala intombazane yaseNyakatho India okokuqala ngivame ukulingiswa endimeni yamaMarathi, Hindi noma South Indian. Bekufanele ngisebenze ngendlela engikhuluma ngayo lokho bekuyisipiliyoni esihle sokufunda. U-Honey Trehan ungumqondisi omkhulu kangaka, futhi lokho kukhombisa kakhulu emsebenzini wakhe okuningi. Ngisho noSmitha Singh ungumbhali omkhulu bekuyiqembu lonke elihlangane ngenhloso yokwenza umlingo.
Uqophe indlela yakho embonini yokuncintisana kakhulu ngenkathi ugcina ubuqotho bomsebenzi wakho. Yini ebeyingxenye enzima kakhulu kule minyaka eyishumi nesigamu edlule?
Ngifunde isikhathi eside ukuthi imboni yamafilimu yibhizinisi, futhi abantu abadali kuphela ngoba bayabuthanda ubuciko. Lapho uthola umsebenzi ovumelaniswa nenqubo yakho yokucabanga, ukhuthazeka ukuba ube ngcono kuwo. Futhi angikaze ngicabange ukwenza ukuhlinzwa okwenziwe impi yami enkulu kakhulu.
Usho ukuthi, ngakwesokunxele kumadivayisi akho, uzohlala ezingutsheni zakho zikanokusho. Ngabe kunjalo ezweni langemva kobhadane?
Kuyiqiniso ngampela. Ngokuya ngemfashini, nginezinto ezinomkhawulo kakhulu engingazibiza ngomncane kunaleyo ndlela. Angikaze ngibe ngumnikazi wokuthi yini ebengingeke ngiyisebenzise. Ngithanda ukusebenzisa imali yami ngokudla, ukuvakasha nakwezinye izinto engizithandayo.
Athini amathiphu akho engqondo nomzimba onempilo?
Ukuzivocavoca umzimba, ukulala nokudla okuhle kubaluleke kakhulu. Ngikholwa ukuthi umzimba wakho uyithuluzi lakho, futhi ukugcina umzimba wakho uphilile nakho kukhombisa inhlalakahle yakho yengqondo. Unyaka odlule ungifundise ukwamukelwa, ukungaphili ngokwenqaba, nokuyeka ukukhathazeka ngokungakwazi ukulawula izinto. Ukwakha uhlelo oluhle lokusekela nakho kubalulekile empilweni yengqondo.
Yini imantra yakho yokubhekana nokungaqiniseki nengcindezi?
Ukungaqiniseki kuyisinongo sempilo. Futhi ingcindezi yinto edinga ukusetshenzwa njalo. Ukuzivocavoca umzimba kuyangicindezela kakhulu. Ngizama nokusebenzisa isikhathi sami kokuthile okwakhayo. Ngiyazifela ngokufunda izilimi ezintsha, ukubhala, ukwenza imisebenzi yasendlini ukuze ngingeze inani kimi.
Yini ekwenza uvuke njalo ekuseni ngomfutho nentshiseko?
Ngiyakuthanda ukuvuka ngomcabango webhulakufesi! Futhi lapho ngimatasa nomsebenzi othile omuhle, noma ngihlele ukuhlangana nomuntu engilangazelele ukuhlangana naye!
Yini esingabheka phambili kuwe?
Kukhona uchungechunge lwekusasa engiludubule ngonyaka odlule oluhlelelwe ukukhishwa kulo nyaka, futhi ngiyayithanda impela leyo phrojekthi. Kuyimfihlakalo yamahlaya futhi kujabulisa ngokweqile.
amakhambi asekhaya okukhula kwezinwele ezinde
izinwele zangaphambili zigundwe izinwele eziqondile
ukuvimbela kanjani ukuwa kwezinwele
amathiphu wobuhle obenzelwe ubuso
amakhambi emvelo ezinwele zobuso
ukusetshenziswa kokudla ama-alimondi afakwe emanzini